China Ndị na-emepụta ọkụ ọkụ - YLI ELECTRONICï¼ˆASIAï¼ ‰ LTD
Ulo > Ịnye ọkụ
Maka mkpọchi eletriki niile ịkwesịrị ijikọ ha na ọkọnọ ike. N'ihi na akara akara, na voltaji bụ 12 / 24V., Yli Nlụpụta dị otú ahụ ihe maka ohere akara kwa.
E nwere ike ọkọnọ mgbe niile, ịmafe ike ọkọnọ na kwa ọkọnọ na batter ndabere.
Anyị na-emepụta ọtụtụ ụdị ike ọkọnọ, 3A, 5A, 12 / 24V iji gboo mkpa dị iche iche nke ndị ahịa.
YP-904-3-B Gbanye Ike Tụkwasịnụ
Ọ bụ ezigbo ọkọnọ ike nke emereziri maka ịnweta sistemu njikwa. Ọ nwere ike ịmalite nke ọma na nchebe akpaka mgbe volta dị elu. Anyị na-etinye ihe ngosi ọkụ na ya iji gosi ọkwa nke onwe ya yana mkpọchi.
YP-904-5-B Gbanye Ike Tụkwasịnụ
YP-903-12-5 Akwụsịghị njikwa ọkọnọ ya
Nke a bụ n'ụzọ zuru ezu akpaka nwere ọgụgụ isi iwepụ ike ọkọnọ njikwa.With elu àgwà mmewere na anyị elu-notch nkà na imewe na mmepe, ọ nwere ike na-arụ ọrụ were were na nwayọọ nwayọọ.Ọ bụ a n'ụzọ zuru ezu akpaka nwere ọgụgụ isi iwepụ ike ọkọnọ njikwa. nkà kachasị elu na imewe na mmepe, ọ nwere ike ị......
ABK-901-12-3 Njikwa Nweta Ike
A na-eji onye na-ejikwa ihe ọkụkụ ejiri ihe dị ka ihe dị elu na-ebubata ya na nke kachasị mma na nhazi na mmepe. Ndabere na ogo ya.
YP-901-12-3 Njikwa Nweta Ike
Site na nhọta nke ihe mbupute etinyere na mbụ, onye na-enye ike na-echekwa nchekwa ma na-adịgide adịgide, a na-ahaziri ya nke ọma maka ụdị ụzọ nchịkwa ụzọ ọ bụla na usoro sistemụ ụlọ.
ABK-902-12-3 A Na-egbochi njikwa njikwa ya